IIA IIO IIS
Date: 24 juin 2017 - 12:29
ka aiza ka aiza daholo sika e . Bdb ny lasa any finda . Mba tsarovy ny tanàna e
zay zao de mijorojoro eto amin ny champzelizé sisa . Mitazatazana ny avy devarah ambatomainty manjakaray . mascar .....
tohizo eto zalahy sy zavavy ny maresaka eran ny tanàna na ny taloha be na ny anketriny na ny ho avy an .
Re: IIA IIO IIS
Date: 03 juillet 2017 - 21:06
Sanzelise... Toerana fandalovana sisa! Nahafinaritra teny an... Efa l'asa zanaka ampielezana sisa e! Fa tsy dia misy fivoarana an!
Mbola velona ve le Radada mpanao kiraro teo akaikinareo fakana bus taloha?
Par: mponina teny
Date: 24 juillet 2017 - 08:37
Efa nilatsaka ery ambainimnbany ny arret bus fa tena ohatran'ny tsy tsikaritro eo intsony tokoa le ranga efa razoky fotsy volo be mpanao kiraro teo @ le trano hazo iny.
Ohatran'ny snack sy salle de jeu izao no eo akaikiny eo.